Olee otú ịrụzi a rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi Excel faịlụ
Home ngwaahịa DataNumen Excel Repair Olee otú ịrụzi a rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi Excel faịlụ
Mgbe Microsoft Excel .xls, .xlw na .xlsx faịlụ gị mebiri emebi ma ọ bụ merụọ n'ihi ọtụtụ ihe ma ị nweghị ike imeghe ha nke ọma na Excel, ịnwere ike iji usoro ndị a iji rụzie faịlụ rụrụ arụ:
Cheta na: Tupu starting a data mgbake usoro, ị kwesịrị mee nkwado ndabere nke faịlụ izizi mbụ gị rụrụ arụ. Nke a bụ most nzọụkwụ dị mkpa ọtụtụ ndị ga-echezọ.
Nke mbu, Microsoft Excel nwere oru idozi. Mgbe ọ chọpụtara na nrụrụ aka dị na faịlụ Excel gị, ọ ga - adị start Iweghachite faịlụ mode ma gbalịa idozi faịlụ ahụ maka gị. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na Iweghachite faịlụ mode adịghị start na-akpaghị aka, mgbe ahụ ị nwere ike ịmanye Excel iji rụzie faịlụ gị na aka gị. Were Excel 2013 dị ka ihe atụ, usoro ndị a bụ:
na File menu, pịa Open.
Na Open igbe, họrọ faịlụ na ị chọrọ imeghe, na pịa akụ na-esote na Open bọtịnụ.
Pịa Mepee ma rụkwaa, wee họrọ usoro ị chọrọ iji weghachite akwụkwọ ọrụ gị.
họrọ mmezi nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwetaghachi data dịka o kwere mee site na faịlụ rụrụ arụ.
If mmezi anaghị arụ ọrụ, wee jiri Weputa data iji gbalịa wepụ mkpụrụ ndụ ụkpụrụ na usoro site na faịlụ ahụ.
Usoro mgbake dị obere maka ụdị nke Excel.
Dabere na ule anyị, usoro 1 na-arụ ọrụ maka ikpe mgbe nrụrụ na-ada na ọdụ nke faịlụ ahụ. Ma ọ gaghị arụ ọrụ mgbe nrụrụ na-eme na nkụnye eji isi mee ma ọ bụ n'etiti faịlụ ahụ.
Ọ bụrụ na usoro 1 ada ada, a ka nwere ọtụtụ ụzọ iji mezie faịlụ Excel gị aka na Excel, gụnyere ide obere VBA nnukwu, ị nwere ike ịchọta ozi zuru ezu na https://support.microsoft.com/en-gb/office/repair-a-corrupted-workbook-153a45f4-6cab-44b1-93ca-801ddcd4ea53
Enwekwara ngwaọrụ sitere na ndị ọzọ nwere ike imeghe ma gụọ faịlụ Microsoft Excel, dịka ọmụmaatụ,
OpenOffice na http://www.openoffice.org. Nke a bụ ezigbo ọrụ mmeghe emeghe nke emere iji kwado usoro faịlụ Office, gụnyere faịlụ Excel. Akụrụngwa nwere ike ịgba ọsọ n'okpuru Windows.
LibReOffice na https://www.libreoffice.org/. Officelọ ọrụ ọrụ ọzọ anaghị akwụ ụgwọ.
KingSoft Spreadsheets na https://www.wps.com/. Nke a bụ ihe eji arụ ọrụ Windows n’efu nwere ike imeghe faịlụ Excel.
Google Sheets na https://www.google.com/sheets/about/ nwekwara ike imeghe faịlụ Excel na ntanetị.
Mgbe ụfọdụ mgbe Excel na-emeghe imeghe faịlụ gị, ngwaọrụ ndị a nwere ike ịmepe ya nke ọma. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, mgbe ahụ emeghere faịlụ Excel, ị nwere ike ịchekwa ya dịka faịlụ ọhụrụ nke ga-enweghị njehie.
Maka xlsx faịlụ, ha bụ otu otu faịlụ abịakọtara na Zip Ọkpụkpọ faịlụ. Ya mere, mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na ọ bụ naanị ihe kpatara nrụrụ aka ahụ bụ Zip faịlụ, ị pụrụ iji Zip mmezi ngwaọrụ dika DataNumen Zip Repair ịrụkwa faịlụ ahụ, dị ka ndị a:
Na-eche na faịlụ Excel rụrụ arụ bụ a.xlsx, mgbe ahụ ịkwesịrị ịnyegharị ya aha na.zip
iji DataNumen Zip Repair ịrụkwa a.zip ma mepụta faịlụ a ofu a_fixed.zip.
Kpọgharia ahazip laghachi na a_fixed.xlsx
Iji Excel meghee a_fixed.xlsx.
Enwere ike ịdọ aka ná ntị ụfọdụ mgbe ị na-emeghe faịlụ edozi na Excel, hapụ ya ka ọ ghara ileghara ya anya ma Excel ga-anwa imeghe ma mezie faịlụ ahụ. Ọ bụrụ na enwere ike imeghe faịlụ ahụ nke ọma, mgbe ahụ ị nwere ike ịchekwa ọdịnaya dị na faịlụ ọzọ na-enweghị njehie.
Ọ bụrụ na ụzọ niile dị n'elu ada, mgbe ahụ ịkwesịrị iji DataNumen Excel Repair iji dozie nsogbu ahụ. Ọ ga-i scanomi ndị rụrụ arụ faịlụ na n'ịwa ọhụrụ njehie-free faịlụ n'ihi na ị na-akpaghị aka.